covid19 Archives ⋆ Magamba Network
We dont just test everyone for COVID-19, otherwise we waste resources, says Govt
Daniel Chigundu April 03, 2020 Articles, corona virus, COVID-19, covid19, Imported, who0 comments
Government has said the number of people who have been tested of the deadly COVID-19 looks small because they are not just testing everyone but are using case definition to determine who will be tested in a bid to effectively use the limited available resources. According to Doctor Christina Rundi Minister of Health Malyasia (2009), …
The post We dont just test everyone for COVID-19, otherwise we waste resources, says Govt appeared first on Open Parly.
COVID-19 lockdown creates room for sexual abuse says LEAD
Daniel Chigundu April 01, 2020 Articles, corona virus, COVID-19, covid19, Imported, who0 comments
LEAD National Women’s Council secretary-general Bertha Muzvidzwa says there is need for transparency and accountability from responsible authorities to ensure abuses will not take place during distribution of COVID-19 goods. Some privileged people in Zimbabwe especially those tasked with the distribution of aid have tended to abuse women and girls as was the case in …
The post COVID-19 lockdown creates room for sexual abuse says LEAD appeared first on Open Parly.
MPs respond to Wadyajena’s salary challenge
Daniel Chigundu March 31, 2020 Articles, CDC, corona virus, COVID-19, covid19, Imported, who0 comments
Following a challenge by Gokwe-Nembudziya legislator Justice Mayor Wadyajena for legislators, ministers and other government officials to donate their salaries towards COVID-19 response, we asked a few legislators on their thoughts to the challenge. Zanu PF Chief Whip in the National Assembly Pupurai Togarepi (Gutu South) said he supports the challenge adding that legislators need …
The post MPs respond to Wadyajena’s salary challenge appeared first on Open Parly.